Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : hanohitra ny FC Séville ny Leicester City | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : hanohitra ny FC Séville ny Leicester City
Hatao anio, ny lalao ampahavalon-dalana mandroso roa farany eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa na ny «ligue des champions», taranja baolina kitra. Fihaonana iray mety hampisy vokatra tsy ampoizina ny fifandonan’ny FC Séville avy any Espaina sy ny Leicester City an-dry zareo Anglisy.
Any Espaina no hanaovana ny lalao anio. Raha ny herijikan’ny ekipa roa tonta aloha dia ry zareo Espaniola no heverin’ny rehetra fa ho tafavoaka. Tsy maintsy hitady fandresena avy hatrany ity ekipan’i Espaina ity, amin’izao lalao voalohany izao, raha te hanana aroriaka tsara amin’ny lalao miverina, hatao any Angletera. Ry zareo Leicester rahateo mafy hohanina rehefa milalao ao an-kianjany. Ekipa tsinontsinoavin’ny rehetra saingy manana herijika hiakarana amin’ny dingana manaraka.
Ankoatra izay, fihaonana be mpanaraka ihany koa ny an’ny FC Porto sy ny an’ny Juventus de Turin. Ry zareo Portioge no hampiantrano ny Italianina amin’ity. Sarotra ny vinavina satria hifandona ny samy andrarezina. Na izany aza, mety hanana tombony ny Juve noho izy mbola handray ny lalao miverina.